မန်စီးတီးတို့ အာဆင်နယ်ကို 4-1 နဲ့ ကျော်ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့ပွဲက မှတ်မှတ်သားသား ပြောစရာ ၇ ချက် – Sports A2Z
မန်စီးတီးတို့ အာဆင်နယ်ကို 4-1 နဲ့ ကျော်ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့ပွဲက မှတ်မှတ်သားသား ပြောစရာ ၇ ချက်
ခြေကောင်းပေမယ့် ကံမကောင်းတဲ့ ဂါဘီ – မာတီနယ်လီတစ်ယောက် ဒီနေ့ပွဲမှာ ဘယ်တောင်ပံကနေ ခြေစွမ်းပြပြီး မန်ချက်စတာစီးတီးကို အမျိုးမျိုး ဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့သလို ဖြတ်တင်ဘောကနေ ဂိုးဖန်တီးခဲ့ပေမယ့် ပွဲချိန် ၄၃ မိနစ်မှာတော့ ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေ အတွက်တော့ ဒီအချိန်မတိုင်ခင်အထိ မျှော်လင့်ချက် ကြီးမားခဲ့ရတဲ့ ဘရာဇီးလ်သားတစ်ယောက် ခြေကျင်းဝတ်ဒဏ်ရာ ရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုနေကြပြီး မပြင်းထန်ဖို့နဲ့ အမြန်ဆုံး အားကိုးနိုင်ဖို့ပဲ ဆုတောင်းရမှာပါ။
ဂိုးမိုးခေါင်ရာကနေ မိုးဖွဲကျလာခဲ့တဲ့ ဂျေဆူးစ် – အာဆင်နယ်ရဲ့ ဂါဘီတစ်ယောက် ကံမကောင်းခဲ့ပေမယ့် မန်စီးတီးရဲ့ ဂါဘီကတော့ ကံကောင်းလာခဲ့ပါပြီ။ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ နေရာယူပုံတွေနဲ့ တစ်ဖက်နောက်တန်းကို ခြိမ်းခြောက်ပြီး ခေါင်းတိုက်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့သလို အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ကြိမ်ကို အာဆင်နယ်ဂိုးသမား ရူနာဆန် လက်စွမ်းပြကာကွယ်သွားခဲ့လို့သာ တစ်ဂိုးတည်းနဲ့ ကျေနပ်ခဲ့ရတာပါ။ ဒီနေ့ ရလိုက်တဲ့ ဂိုးကြောင့် သူ့ရဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံ ၈ ပွဲဆက် ဂိုးမိုးခေါင်မှုက ၆၀၉ မိနစ်အကြာမှာ ရပ်တန့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ပျက်စရာပဲ များနေတဲ့ အာဆင်နယ် – ဒီနေ့မှာ ခံစစ်တွေရဲ့ နေရာယူပုံ၊ လူကပ်ပုံ၊ လူကျွံဘောဖမ်းပုံတွေက မသေသပ်မှုတွေများပြီး ဂိုးတွေ ပေးခဲ့ရသလို ဒိုင်းဝန်ထက် ကဲခဲ့တဲ့ မောင်ပုလဲကတော့ အဲလက်စ် ရူနာဆန် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တန်းရဲ့ရှေ့အထိ တက်ကစားနေခဲ့တဲ့ လူငယ်ဘဝ ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဂိုးသမားဟာ ဒီနေ့မှာ ဂိုးသမား သိပ်မဆန်ဘူးလို့ ပြောရမှာလည်းဖြစ်ပြီး မာရက်ဇ်ရဲ့ ဖရီးကစ်ကို ပုတ်ထုတ်ဖို့ အခြေခံကိုတောင် မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေ စိတ်ပျက်ခဲ့ရတာပါ။
စွန့်စားမှု အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂွါဒီယိုလာ – ဒီဘရိုင်းနားကို အနားပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဘာနာဒို ဆေးလ်ဗားနဲ့ ဖိုဒန်ကို ကစားကွက်တည်ခိုင်းခဲ့တဲ့ ပက်ပ်ရဲ့ နည်းဗျူဟာနဲ့ စွန့်စားမှုက ဒီနေ့မှာ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၃-၅-၂၊ ၃-၄-၃ နဲ့ ၄-၃-၃ ရောထွေးနေတဲ့ အာဆင်နယ်ကို ကိုယ်ပိုင်ဟန်အောက်မှာ နှစ်မြှုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ ဒီနေ့ကစားပုံမှာ အရန်ကစားသမားတွေကလည်း ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ဆုဖလားလမ်းကြောင်းမှာ ရှေ့တစ်လှမ်းတိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူးရဲ့ စံချိန်ကို စိန်ခေါ်မယ့် စီးတီး – ဒီရာသီမှာ မန်စီးတီးတို့အနေနဲ့ ကာရာဘောင်းဖလားကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ နိုင်ပွဲနှစ်ပွဲသာ လိုပါတော့တယ်။ (ကိုဗစ်ကြောင့် ပြိုင်ပွဲထုံးစံဖြစ်တဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ် ၂ ကျော့ မကစားတော့ပါ။) ဒီနှစ်မှာ ဒီဖလားကို ထပ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ရင်တော့ ဆက်တိုက် ရယူမှု ၄ ကြိမ်နဲ့ လီဗာပူးလ်ရဲ့ ၁၉၈၁ ကနေ ၁၉၈၄ အတွင်း နည်းပြနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဘော့ဘ် ပေ့စ်လီနဲ့ ဂျိုးဖာဂန်တို့ ရယူခဲ့တဲ့ စံချိန်ကိုလည်း တူညီနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ဂွါဒီယိုလာကတော့ တစ်ဦးတည်း ကိုင်တွယ်ပြီး ၄ ကြိမ် ရယူနိုင်သူလည်းဖြစ်လာမှာပါ။
5 – Riyad Mahrez has scored his fifth direct free-kick in all competitions in English football and first since netting vs Everton in the Premier League in September 2019. Fortunate. pic.twitter.com/wtJkdmkDE9
ဖရီးကစ်နဲ့ တာစားနေတဲ့ မာရက်ဇ် – မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့ တောင်ပံတိုက်စစ်မှူး ရီယက် မာရက်ဇ်ကတော့ အင်္ဂလိပ် ဘောလုံးလောကမှာ ဖရီးကစ်တွေနဲ့ ကံစပ်နေတယ်လို့ ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အဲဗာတန်အသင်းဘက်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ လကနေ သွင်းယူခဲ့တဲ့ ဖရီးကစ်ကနေ စတင်ရေတွက်ရင် ဒီနေ့ဂိုးနဲ့ဆိုရင် ၅ ဂိုးမြောက်ကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်စွန်းစွန်းကာလအတွင်းမှာ ကံကောင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
4 – Manchester City are the first team to win four consecutive away games against Arsenal in all competitions since Chelsea between 1960 and 1965 (six inarow). Cornered. pic.twitter.com/OcLazrRxlg
မန်စီးတီးအတွက် အမ်းမရိတ်အောင်မြေ – မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းအတွက်တော့ အာဆင်နယ်အသင်းကို အမ်းမရိတ်ကွင်းကြီးထဲမှာ ပြိုင်ပွဲစုံ နောက်ဆုံး ၄ ပွဲဆက်တိုက် အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး အိမ်ရှင်တွေအတွက်တော့ မျက်နှာပျက်စရာလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းကို သူတို့ရဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ ဒီထက်ပိုပြီး ပွဲဆက်တိုက် အနိုင်ယူခဲ့တာကတော့ ၁၉၆၀ ကနေ ၁၉၆၅ ခုနှစ်ကြားမှာ ချဲလ်ဆီးရဲ့ ၆ ပွဲဆက် အနိုင်ယူမှုဖြစ်တယ်လို့လည်း မှတ်တမ်းတွေက ဖော်ပြထားပါတယ်။
ေျခေကာင္းေပမယ့္ ကံမေကာင္းတဲ့ ဂါဘီ – မာတီနယ္လီတစ္ေယာက္ ဒီေန႔ပြဲမွာ ဘယ္ေတာင္ပံကေန ေျခစြမ္းျပၿပီး မန္ခ်က္စတာစီးတီးကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ဒုကၡေပးႏိုင္ခဲ့သလို ျဖတ္တင္ေဘာကေန ဂိုးဖန္တီးခဲ့ေပမယ့္ ပြဲခ်ိန္ ၄၃ မိနစ္မွာေတာ့ ဒဏ္ရာရရွိသြားခဲ့ျပန္ပါတယ္။ အာဆင္နယ္ပရိသတ္ေတြ အတြက္ေတာ့ ဒီအခ်ိန္မတိုင္ခင္အထိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးမားခဲ့ရတဲ့ ဘရာဇီးလ္သားတစ္ေယာက္ ေျခက်င္းဝတ္ဒဏ္ရာ ရရွိသြားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုေနၾကၿပီး မျပင္းထန္ဖို႔နဲ႔ အျမန္ဆုံး အားကိုးႏိုင္ဖို႔ပဲ ဆုေတာင္းရမွာပါ။
ဂိုးမိုးေခါင္ရာကေန မိုးဖြဲက်လာခဲ့တဲ့ ေဂ်ဆူးစ္ – အာဆင္နယ္ရဲ႕ ဂါဘီတစ္ေယာက္ ကံမေကာင္းခဲ့ေပမယ့္ မန္စီးတီးရဲ႕ ဂါဘီကေတာ့ ကံေကာင္းလာခဲ့ပါၿပီ။ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ ေနရာယူပုံေတြနဲ႔ တစ္ဖက္ေနာက္တန္းကို ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေခါင္းတိုက္ဂိုးသြင္းႏိုင္ခဲ့သလို အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ႀကိမ္ကို အာဆင္နယ္ဂိုးသမား ႐ူနာဆန္ လက္စြမ္းျပကာကြယ္သြားခဲ့လို႔သာ တစ္ဂိုးတည္းနဲ႔ ေက်နပ္ခဲ့ရတာပါ။ ဒီေန႔ ရလိုက္တဲ့ ဂိုးေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲစုံ ၈ ပြဲဆက္ ဂိုးမိုးေခါင္မႈက ၆၀၉ မိနစ္အၾကာမွာ ရပ္တန႔္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
စိတ္ပ်က္စရာပဲ မ်ားေနတဲ့ အာဆင္နယ္ – ဒီေန႔မွာ ခံစစ္ေတြရဲ႕ ေနရာယူပုံ၊ လူကပ္ပုံ၊ လူကြၽံေဘာဖမ္းပုံေတြက မေသသပ္မႈေတြမ်ားၿပီး ဂိုးေတြ ေပးခဲ့ရသလို ဒိုင္းဝန္ထက္ ကဲခဲ့တဲ့ ေမာင္ပုလဲကေတာ့ အဲလက္စ္ ႐ူနာဆန္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တန္းရဲ႕ေရွ႕အထိ တက္ကစားေနခဲ့တဲ့ လူငယ္ဘဝ ကြင္းလယ္လူေဟာင္း ဂိုးသမားဟာ ဒီေန႔မွာ ဂိုးသမား သိပ္မဆန္ဘူးလို႔ ေျပာရမွာလည္းျဖစ္ၿပီး မာရက္ဇ္ရဲ႕ ဖရီးကစ္ကို ပုတ္ထုတ္ဖို႔ အေျခခံကိုေတာင္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္လို႔ ပရိသတ္ေတြ စိတ္ပ်က္ခဲ့ရတာပါ။
စြန႔္စားမႈ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဂြါဒီယိုလာ – ဒီဘ႐ိုင္းနားကို အနားေပးဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ဘာနာဒို ေဆးလ္ဗားနဲ႔ ဖိုဒန္ကို ကစားကြက္တည္ခိုင္းခဲ့တဲ့ ပက္ပ္ရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာနဲ႔ စြန႔္စားမႈက ဒီေန႔မွာ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၃-၅-၂၊ ၃-၄-၃ နဲ႔ ၄-၃-၃ ေရာေထြးေနတဲ့ အာဆင္နယ္ကို ကိုယ္ပိုင္ဟန္ေအာက္မွာ ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ မန္စီးတီးအသင္းရဲ႕ ဒီေန႔ကစားပုံမွာ အရန္ကစားသမားေတြကလည္း ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ ဆုဖလားလမ္းေၾကာင္းမွာ ေရွ႕တစ္လွမ္းတိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
လီဗာပူးရဲ႕ စံခ်ိန္ကို စိန္ေခၚမယ့္ စီးတီး – ဒီရာသီမွာ မန္စီးတီးတို႔အေနနဲ႔ ကာရာေဘာင္းဖလားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ပြဲႏွစ္ပြဲသာ လိုပါေတာ့တယ္။ (ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲထုံးစံျဖစ္တဲ့ ဆီမီးဖိုင္နယ္ ၂ ေက်ာ့ မကစားေတာ့ပါ။) ဒီႏွစ္မွာ ဒီဖလားကို ထပ္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာ့ ဆက္တိုက္ ရယူမႈ ၄ ႀကိမ္နဲ႔ လီဗာပူးလ္ရဲ႕ ၁၉၈၁ ကေန ၁၉၈၄ အတြင္း နည္းျပႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဘာ့ဘ္ ေပ့စ္လီနဲ႔ ဂ်ိဳးဖာဂန္တို႔ ရယူခဲ့တဲ့ စံခ်ိန္ကိုလည္း တူညီႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ဂြါဒီယိုလာကေတာ့ တစ္ဦးတည္း ကိုင္တြယ္ၿပီး ၄ ႀကိမ္ ရယူႏိုင္သူလည္းျဖစ္လာမွာပါ။
ဖရီးကစ္နဲ႔ တာစားေနတဲ့ မာရက္ဇ္ – မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕ ေတာင္ပံတိုက္စစ္မႉး ရီယက္ မာရက္ဇ္ကေတာ့ အဂၤလိပ္ ေဘာလုံးေလာကမွာ ဖရီးကစ္ေတြနဲ႔ ကံစပ္ေနတယ္လို႔ ေျပာရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ အဲဗာတန္အသင္းဘက္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လကေန သြင္းယူခဲ့တဲ့ ဖရီးကစ္ကေန စတင္ေရတြက္ရင္ ဒီေန႔ဂိုးနဲ႔ဆိုရင္ ၅ ဂိုးေျမာက္ကို ရရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္စြန္းစြန္းကာလအတြင္းမွာ ကံေကာင္းေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
မန္စီးတီးအတြက္ အမ္းမရိတ္ေအာင္ေျမ – မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းအတြက္ေတာ့ အာဆင္နယ္အသင္းကို အမ္းမရိတ္ကြင္းႀကီးထဲမွာ ၿပိဳင္ပြဲစုံ ေနာက္ဆုံး ၄ ပြဲဆက္တိုက္ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အိမ္ရွင္ေတြအတြက္ေတာ့ မ်က္ႏွာပ်က္စရာလည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အာဆင္နယ္အသင္းကို သူတို႔ရဲ႕ အိမ္ကြင္းမွာ ဒီထက္ပိုၿပီး ပြဲဆက္တိုက္ အႏိုင္ယူခဲ့တာကေတာ့ ၁၉၆၀ ကေန ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ၾကားမွာ ခ်ဲလ္ဆီးရဲ႕ ၆ ပြဲဆက္ အႏိုင္ယူမႈျဖစ္တယ္လို႔လည္း မွတ္တမ္းေတြက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
23 Dec နံနက်ခင်း နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ စုစည်းမှု
ဂိုးဘယ်လိုသွင်းရသလဲဆိုတာကို အာဆင်နယ်ကွင်းမှာ ပြန်သတိရသွားတဲ့ မန်စီးတီးတို့ ဆီမီးတက်
အယ်လ်ဂျီးရီးယား ပြုတ်ပြီး၊ အိုင်ဗရီကို့စ်၊ မာလီတို့ ၁၆...
အာဖရိကဖလား အုပ်စု(D)ကနေ ၁၆ သင်းအဆင့် အတူတက်ခဲ့ကြတဲ့...